နေ့သစ်တစ်နေ့ကို စတင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ တချို့က နံနက်ခင်းလမ်းလျှောက်ပြီး စတင်ကြသလို တချို့ က တရားထိုင်ပြီး စတင်ကြပါတယ်။ တစ်နေ့လုံး စွမ်းအားပြည့် ရှိနေစေမယ့် နေ့သစ်တစ်နေ့ စတင်နည်းကို အကြံပေးပါရစေ။
(၁) နံနက်တိုင်း တူညီသော အချိန်တွင် အိပ်ရာထပါ
နံနက်တိုင်း တူညီတဲ့ အချိန်မှာ အိပ်ရာထတာကြောင့် သင်ကိုယ်တွင်း ဇီဝနရီ ဟန်ချက်ညီပြီး သင့်မျက်နှာက ကြည်လင်နေပါလိမ့်မည်။ နေ့စဉ် တူညီတဲ့ အချိန်မှာ အိပ်ရာဝင်၊ အိပ်ရာထ လုပ်တာကြောင့် ကိုယ်ရော စိတ်ပါ လန်းဆန်းနေပါလိမ့်မယ်။
လူတွေရဲ. ချစ်ခင်မှုရဖို. စက္ကန်.(၃၀)နည်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ စက္ကန်.(၃၀)နည်းဆိုတာ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်နဲ. စကားပြောတဲ့အခါ စကားစပြောတဲ့အချိန်ကနေ စက္ကန်.(၃၀)အတွင်း ဒီလူရဲ.ကောင်းကြောင်း၊ ဒီလူအားတက်စေမယ့် အရာတစ်ခုကို ပြောဖို.ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် “သူငယ်ချင်း မင်းဝတ်ထားတဲ့ အင်ကျီက မင်းနဲ.သိပ်လိုက်တယ်” “ဆွေးနွေးပွဲမှာခင်ဗျားမေးတဲ့မေးခွန်းက သိပ်ကောင်းတယ်ဗျာ” “ခင်ဗျားကို ကြည့်ရတာလန်းဆန်းတက်ကြွနေတာပဲ၊ ကျွန်တော်တို.ဆေးကောင်းရှိရင် ပြောပါဦး” စသည့်တို. ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ ဟန်လုပ်ပြီးပြောလို.တော့မရပါဘူး။ လူတွေပေါ်မှာ မေတ္တာထားရင်၊ တန်ဖိုးထားရင် ကောင်းကွက်လေးတွေကို အမြဲမြင်ရပါတယ်။ လူတော်တော်များများကတော့ လူတွေနဲ. ပြေဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါ မိမိတော်ကြောင်း၊ မိမိဘာလုပ်ကြောင်း၊ မိမိအကြောင်းကိုပဲ ပြောဖို.စိတ်အားထက်သန်နေတတ်ကြပါတယ်။
နည်းမသိရင် စ်ိတ်က ညစ်သည်ထက် ညစ်မှာ သေချာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
စိတ်မကြည်လင်ဘဲ စိတ်အမှောင်ထဲမှာပဲ တ၀ဲဝဲလည်နေလို့ ဖြစ်တယ်။ စိတ်ကို သတိနဲ့ ထိန်းနိုင်ရမယ်။ စိတ်ဆင်းရဲရင် သတိနဲ့ထိန်းနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ရမယ်။
အလုပ်အတွက် အချိန်ပေးသလို၊ ကစားဖို.၊ အနားယူဖို.အတွက်လည်း အချိန်ပေးပါ